Soo dejisan Open Broadcaster Software 0.659 – Vessoft
Soo dejisan Open Broadcaster Software
Open idaacadda Software – software awood leh in ay qabsadaan video iyo baahiyey content kala duwan ee multimedia internet-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad baahiyey video qulqulaya kulan caan ku saabsan adeegyada sida dhifasho, YouTube, DailyMotion, Hitbox, GoodGame iwm Open idaacadda Software waa mid fudud in la isticmaalo iyo helitaanka qalab tayo leh oo diirada saaraya qabashada hawlaha aasaasiga ah ee kharashka ugu yaraan mar. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan habka mudnaanta qabtay, ballaarinta, oo tayo leh, qaab of audio iyo qaar badan oo kale. Open idaacadda Software wuxuu taageeraa daro in la ballaariyo fursadaha of software ah.
Oo la wareegtay video iyo baahiyey content multimedia internet-ka
Tiro balaadhan oo ah qalab
Open Broadcaster Software Software la xiriira: